Misoro yeNhau, Chishanu Mbudzi 29, 2019
Magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwaanoti kushungurudzwa nemapurisa.
Zimbabwe neUNICEF dzinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose, cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child, mutungamiriri wenyika wevechidiki, Mukudzeishe Madzivire achiti vechidiki vanodawo kupa pfungwa dzavo pakuumbwa kwemitemo pamwe nepanotorwa matanho ese ane chekuita navo.
Paita mheremhere pamahofisi ekwa Registrar-General panotorerwa mapasipoti muChinhoyi nhasi apo vanhu vakawandisa vasundana kuti vaforere magwaro ekufambisa aya.
Zvinhu zvoramba zvichiondomoka muzvipatara zvehurumende zvemunyika nekuda kwekuramwa mabasa kwavanachiremba, avo vava nemwedzi mitatu vachiti mari yavari kutambira yave shoma zvikuru zvekuti haina zvaichatenga.
Chikwata cheHighlanders chotarisira kupedza nhomba yemakore matanhatu chisina kutora mukombe mukuru apo chiri kupinda mufainari yeChibuku Super Cup neNgezi Platinum Stars muBarbourfields Stadium mangwana.
Muchirongwa chedu che LiveTalk na8 pm nhasi, tiri kutarisa kuramba zvinhu zvooma mune zvehutano nekuda kwekuramwa mabasa kwavanachiremba, uye danho rehurumende rekuti vanachiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kumabasa mukati memazuva maviri.